Our Website address iri https://www.newgenapps.com.
Kana iwe ukaisa mifananidzo kune iyo Website, iwe unofanirwa kudzivirira kurodha mifananidzo ine yakamisikidzwa nzvimbo data (EXIF GPS) inosanganisirwa. Vashanyi ku Website inogona kudhawunirodha uye kubvisa chero data yenzvimbo kubva pamifananidzo pa Website.
Kana iwe ukasiya chirevo pane yedu saiti unogona kusarudza-mukati kuchengetedza zita rako, email kero uye Website mumakuki. Izvi ndezvekurerutsira iwe kuti usazofanirwa kuzadzazve ruzivo rwako kana wasiya imwe mhinduro. Aya makuki achagara kwegore rimwe.
Zvinyorwa pane ino saiti zvinogona kusanganisira zvakaiswa gutsikana (semuenzaniso mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo). Embedded gutsikana kubva kune vamwe Websites inozvibata chaizvo sekuti muenzi ashanyira mumwe Website.
izvi Websites inogona kuunganidza data pamusoro pako, kushandisa makuki, kunyudza imwe yechitatu-bato yekutevera, uye kutarisa kudyidzana kwako neiyo yakadzikwa. gutsikana, kusanganisira kuronda kudyidzana kwako neyakaiswa gutsikana kana iwe uine account uye wakapinda mairi Website.
Kana iwe ukakumbira password reset, yako IP kero inozoverengerwa mune iyo reset email.
Kune vashandisi vanonyoresa pane yedu Website (kana iripo), isu tinochengetawo ruzivo rwemunhu rwavanopa mune yavo mushandisi chimiro. Vese vashandisi vanogona kuona, kugadzirisa, kana kudzima ruzivo rwavo chero nguva (kunze kwekunge vasingakwanise kuchinja zita ravo rekushandisa). Website vatungamiri vanogonawo kuona nekugadzirisa ruzivo irworwo.
Kana iwe uine account pane ino saiti, kana kuti wakasiya makomendi, unogona kukumbira kugashira kunze faira re data rako pachako ratinobata nezvako, kusanganisira chero data rawakatipa. Iwe unogona zvakare kukumbira kuti tidzima chero data rako pachako ratinobata nezvako. Izvi hazvisanganisi chero data yatinosungirwa kuchengetedza yekutonga, zviri pamutemo, kana chibatiso zvinangwa.
AI maapplication (7)
Anokudziridza App (18)
Mirayiridzo yeApp Store (2)
App Store Kuita (3)
App Store Kurambwa (2)
chakagadzirwa Intelligence (84)
Cloud Kutama (10)
bhizinesi rekubvunza (4)
zvakasikwa zvemukati (8)
Content Content (3)
kugadzira webhusaiti (3)
Kuvimbika kwevatengi (8)
Mabatiro evatengi (3)
Kudzidza zvakadzika (6)
Inotsanangurwa Analytics (5)
Dhizaini Yemaitiro (8)
Digital Nokuchinja (60)
mushandi wevashandi (2)
Akangwara kushandisa michina (11)
IoT Anwendung (14)
kugadzira tech (2)
kutsvakurudza misika (3)
nhare mbozha kusimudzira (14)
Zvitoro zvepamhepo (3)
Kufanotaura Ongororo (25)
SAAS mhinduro (2)
Kutanga kubvunza (10)
Technology Kubvunza (12)
Technology Kugadzira (2)
zvigadzirwa zvetekinoroji (468)
Mushandisi ruzivo UX (5)
chaiyo chaiyo maapplication (3)
Wireless Security Maitiro (2)